Sida loo tirtiro dhammaan xisaabaadka emaylkaaga | Wararka Gadget
Sida loo tirtiro dhammaan akoonnada emaylkaaga
Villamandos | | Tababarada
Muddo aan fogeyn ayaan xisaab ku lahaa email waxaa loo qoondeeyay dad yar oo mudnaan leh oo marin ka heli kara internetka. Maalmahan waxbadan baa is badalay, inteena badanaana durba waxaan marin u leenahay isku xirka shabakadaha, maahan oo kaliya waxyaabahayaga, laakiin meel kasta oo aan uga mahad celino aaladaha mobilada. Intaas waxaa sii dheer, nabadgelyada guud, haddii aan raadineyno, way adkaan doontaa inaan helno qof aan lahayn cinwaan emayl.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatada hadda ka muuqata goobta ayaa leh xisaab aad u tiro badan oo emayllo ah, kuwaas oo mararka qaarkood aynaan isticmaalin oo inta badan kiisaska aan u baahanahay inaan ka noqonno. Waxaas oo dhan, maanta waxaan kuugu sharxi doonnaa qaab fudud sida loo tirtiro dhammaan akoonnada emaylkaaga, iyadoon loo eegin inay ka yimaadeen Gmail, Yahoo ama Hotmail iyo sida ugu dhaqsaha badan.
1 Sida loo tirtiro akoonka emaylka ee Gmail
2 Sida loo tirtiro cinwaanka emaylka Hotmail
3 Sida loo tirtiro akoonka Yahoo mail
4 Sida loo tirtiro akoonka emaylka AOL
Sida loo tirtiro akoonka emaylka ee Gmail
Maanta Gmail waa adeegga ugu isticmaalka badan adduunka oo dhan iyo meesha aad xitaa ka badan karto hal cinwaan e-mayl. Google, milkiilaha adeegga, wuxuu noo fududeynayaa inaan tirtirno koonto, sida ugu badnaan munaasabadaha oo dhan, taas oo ay tahay inaad raacdo talaabooyinka soo socda ee aan hoos ku tusnay;
Soo gal bogga Xulashada Koontada
Hadda dhagsii ikhtiyaarka Ka saar alaabada. Xaaladaha badankood, waa inaad dib ugu soo noqotaa koontadaada si aad u qiyaasto amniga
Ku xigta Gmail, waa inaad riixdo ikhtiyaarka tirtirka
Hadda waa inaad raacdaa tilmaamaha lagu soo bandhigay shaashadda si aad gabi ahaanba uga saarto koontadaada emailka adeegga Google
Sida loo tirtiro cinwaanka emaylka Hotmail
Waxaa jiray waqti markii emailada Hotmail ay ahaayeen kuwa loogu isticmaalka badan yahay, gaar ahaan maxaa yeelay waxay siinayeen marinka codsiga Rasuulka, oo ahaa kii ugu horreeyay ee WhatsApp. Si kastaba ha noqotee, waqtigan la joogo isticmaalkeedu wuu ka yaryahay Microsoft-na waxay na siineysaa suurtagalnimada baabi'inta xisaabaadka emaylka ee Outlook.com (horey u ahaan jiray Hotmail).
Waxaa jiray waqti markii emailada Hotmail ay ahaayeen kuwa ugu isticmaalka badan, gaar ahaan maxaa yeelay waxay siinayeen helitaanka arjiga Rasuulka, kaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee WhatsApp. Si kastaba ha noqotee, waqtigan la joogo isticmaalkeedu wuu ka yaryahay Microsoft-na waxay na siineysaa suurtagalnimada baabi'inta xisaabaadka emaylka ee Outlook.com (horey u ahaan jiray Hotmail).
Si aad si joogto ah u tirtirto e-mailkaaga Hotmail, waa inaad raacdaa tallaabooyinka soo socda, oo mar labaad, oo ka duwan waxa aan dhammaanteen u malayno, waa kuwa ugu fudud;
Soo gal Adeegga koontada Microsoft (horay loo oran jiray Microsoft Passport Network) oo ka saxiix koontada aad rabto inaad tirtirto
Hadda waa inaad raacdaa tilmaamaha ka muuqda shaashadda oo aad ku arki karto sawirka kore. Waa lagama maarmaan inaad si taxaddar leh u aqriso maadaama haddii kale si khalad ah aad u tirtiri karto oo keliya koontada emaylkaaga iyo emaylkaaga, laakiin sidoo kale, tusaale ahaan, faylasha ku keydsan Drive
Mar haddaynu gaadho dhamaadka Microsoft waxay sugi doontaa 60 maalmood inay si joogto ah u tirtirto koontadaada. Haddii aad bedesho maskaxdaada, waa inaad mar labaad gasho oo keliya mudadaas isla markaana xiritaanka koontada la joojiyo. Haddii aadan markale galin 60 maalmood gudahood, Redmond wuxuu si joogto ah u tirtiri doonaa koontadaada.
Sida loo tirtiro akoonka Yahoo mail
Ma aha waqti aad u fog ka hor Yahoo! Waxay ahayd mid ka mid ah adeegyada e-mayl ee hormuudka ka ah suuqa, tiro aad u tiro badan oo isticmaaleyaal ahna waxay leeyihiin cinwaan emayl oo leh @ yahoo.es ama @ yahoo.com. Waqtigan xaadirka weyn ee Mareykanka ma marayo xilligiisii ​​ugu fiicnaa iyo aad iyo aad u badan oo isticmaala ayaa u cararaya goobaha kale. Sababaha badan ee socodkan waxaa ka mid ah nabadgelyo la’aan, sida middii soo martay 2014 kii iyo taas oo, si kastaba ha noqotee, aan loo qiran dadka isticmaala illaa 2016.
Si loo xiro akoonkaaga emailka Yahoo waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda;
Soo gal bogga xiritaanka gaarka ah ee xisaabta Yahoo ama bogga xiritaanka koontada gaarka ah haddii ay dhacdo in qaabkaaga soo galitaanka uu yahay aalad moobil ah
Hadda gali lambarkaaga sirta ah oo guji Xidh koonto. Waa inaad dhammaystirtaa captcha oo aad u xaqiijisaa tirtirka tallaabada ugu dambeysa
Sida loo tirtiro akoonka emaylka AOL
AOL Waa mid ka mid ah adeegyada email-ka ee ugu caansan, laakiin waqti ka dib waxay lumisay qayb weyn oo caan ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ka mid tahay inay na siiso suurtagalnimada maaraynta rukummada adeegyada AOL. Markaad tirtirto koontadayada, waxaan luminey ikhtiyaarka aan ku maamuli karno emaylkeena, laakiin sidoo kale suurtagalnimada maaraynta rukumanka.
Si aad u tirtirto koontada AOL waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda in aan halkan hoose ku tusno;
Soo gal bogga AOL ka dibna koontadaada adoo siinaya username iyo lambarka sirta ah ee aad sida joogtada ah u isticmaasho
Hadda waa inaad gashaa jawaabta su'aasha amniga ee ay na weydiinayaan oo aad gujisaa badhanka "Sii wad".
Xullo ikhtiyaarka "Maamul majaroorkayga AOL" qaybta "Ikhtiyaarrada Adeegga"
Hadda dhagsii badhanka "Tirtir", kaas oo ay ku soo muuqaneyso menu hoos-u-dhac ah oo aan ku dooran karno sabab aan u joojineyno koontadayada.
Ugu dambeyntii, taabo batoonka "AOL baaji" oo tan ayaa howsha lagu soo gabagabeyn doonaa isla markaana koontadaada horay ayaa looga tirtiri doonaa
Waqti kasta oo aan haysanno oo maamulno tiro badan oo ka mid ah xisaabaadka emaylka, laakiin waxaa laga yaabaa inaad joojiso inaad ka fikirto inta aad dhab ahaan u baahan tahay oo aad tixgeliso ka saarista dhammaan kuwa aadan mar dambe isticmaalin. Maqaalkan waxaan ku siinay furayaasha si aad u tirtirto xisaabaadka emaylka ee ugu caansan, markaa shaqada hoos u dhig oo yaree tirada xisaabaadka emaylka.
Miyaad ku guulaysatay inaad tirtirto xisaabaadka emaylkaaga adigoo raacaya talaabooyinka aan soo tilmaannay?. Noosheeg booska loogu talagalay faallooyinka qoraalkan ama shabakadaha bulshada ee aan kujirno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo tirtiro dhammaan akoonnada emaylkaaga
Maria Olmo dijo
Waxaan u arkay maqaalkaaga mid aad u wanaagsan oo faa'iido badan leh, waxaan ka faa’iideystay fursad aan ku joojiyo koonto aanan aqoon sida loo sameeyo. Mahadsanid.
Waxaan sidoo kale helay, anigoo raadinaya sida loo tirtiro koonto, boggan kale ee aan ka helay xiisaha, haddii ay qof caawin karto http://www.eliminartucuenta.com
Jawaab María Olmo
Haye, maheli karo wado aan ku joojiyo akoonkeyga aol.
Waxaan ku soo galayaa magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah, ma sameeyo
su'aal amniga u dhiganta.
Waxaan tagayaa bidix hoose ee bogga: Xisaabteyda, dhagsii iyo
Waxaan aadaa macluumaadka shakhsiga ah, ma jiro xulashooyin kale.
Seedi, konsole isku-dhafan oo kuu oggolaanaya inaad cayaaro ku ciyaarto CD-ga